Ravelonarivo Jean Nangidy ho azy iny 2016 iny
Nangina tanteraka na tsy mbola nanambara ofisialy aza fa hisintaka tanteraka amin�ny sehatra politika ny praiminisitra teo aloha, jeneraly Ravelonarivo Jean taorian�ny paipaika maloto nataon�ny tandapa nentina nanesorana azy tao Mahazoarivo.
Namoaka fanambarana ny Fiadidiana ny Repoblika ny antoandron’ny 8 aprily 2016 fa « nametra-pialana » ny praiminisitra Ravelonarivo Jean ary « neken’ny filohan’ny Repoblika » izany fametraham-pialany izany. Nolavin’ny jeneraly Ravelonarivo Jean marindrano anefa ny fisiany ka nilazany teo anatrehan’ny mpanao gazety teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo ny harivan’ny 8 aprily ihany, fa « tsy nametra-pialana » ny tenany, saingy raha ilaina dia hataony amin’ny fotoana mahamety azy. Niteraka resabe ary nanakoako naneran-tany io tranga io. Ny jeneraly Ravelonarivo Jean no faharoa tato anatin’izao Repoblika faha-4 izao notendren’i Hery Rajaonarimampianina ho lehiben’ny governemanta nandimby toerana an’i Kolo Roger tao Mahazoarivo ny 14 janoary 2015. Nanao be fiavy izy vao tonga tao Mahazoarivo, namaky ady tamin’ny kolikoly ary nilaza fa tsy hamindra fo amin’izay mandika lalàna. Ambetin-teniny ilay hoe : « Tolérance zéro » ary betsaka no nanantena fa hanao zavatra tokoa ity praiminisitra ity, izy rahateo jeneraly avy eo anivon’ny Tafika anabakabaka. Nametraka ny fomba fiasa ahazoam-bokatra haingana isaky ny « 100 andro » izay izy. In-droa miantoana no vita, nefa tsy nety tratra ny tanjona nofaritan’ny governemantany. Tsy tontosa ny fahatelony dia izy nesorina. Sahiran-dava izy niatrika ny tsikera nataon’ny mpanao politika, indrindra ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza. Tamin’ny naha praiminisitra azy no nisian’ny « motion de déchéance » saika hanonganana ny filohan’n Repoblika teo amin’ny fitondrana saingy narovan’ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana ka nandrosoan’ity farany ny tokony hanaovana « pacte de responsabilité ». Tsy nijanona teo fa nitohy tamin’ny « motion de censure » handravana ny governemanta ny depiote fa tsy nahomby ihany koa. Na teo aza anefa izany, dia niha narisarisa ny fifandraisan’ny praiminisitra Ravelonarivo sy ny filoha Rajaonarimampianina. Vao mainka nihenjana ny tady teo amin’ny roa tonta taorian’ny fikasana hisambotra an-dRazaimamonjy Claudine, mpandraharaha vavy tompona hotely iray eny Ivato. Nibaribary io ady mangatsiakan’ny praiminisitra sy ny filohan’ny Repoblika io, tany Farafangana ny 19 martsa 2016. Nilefitra ny jeneraly rehefa nandinika sy nifampiresaka tamin’ireo manodidina azy ka ny 10 aprily 2016 izy no nanao ny taratasy fametraham-pialany. Volana vitsy talohan’io, novambra 2015 dia narary ary nandeha nitsabo tena nandritra ny herinandro vitsivitsy tany Frantsa ny praiminisitra Ravelonarivo Jean. « Harerahana » no nambaran’ireo manodidina azy fa anton’io tsy fahasalamany io. Toa efa fambara ratsy nanilihana azy teo amin’ny fitondrana anefa io. Niverina amin’ny asa fandraharahana nilomanosany an-taonany maro ny Jeneraly Ravelonarivo Jean ; izy no tompon’ny « Entreprise JJ ».